SAWIRRO: Bastian Schweinsteiger oo ilin/ooyin jabsaday kaddib markii….. – Gool FM
SAWIRRO: Bastian Schweinsteiger oo ilin/ooyin jabsaday kaddib markii…..
(Germany) 31 Agoosto 2016. Rugcadaaga reer Germany Bastian Schweinsteiger ayaa ilinta ceshan waayay mar loo saameeyay kulan sagootin ah ciyaar saaxiibtinimo oo iminka dhex mareysa xulalka Germany iyo Finland.
Xiddiga qadka dhexe ee Man United ayaa ooyin jabsaday kaddib markii uu ubax guddoonsiiyay madaxwaynaha xiriirka kubbada cagta dalka Germany ee Reinhard Grindel.
“Inbadan ayaad mahadsan tihiin dhammaan qofkasta oo halkan jooga, wax badan ayay iilo micno tahay midan, had iyo jeer sharaf wayn ayay ii hayd inaan u ciyaaro Jarmalka. Iyo xitaa sharaf ka wayn inaan idin ciyaaro adinka taageerayaashiina, wax aad iyo aad u wayn ayay iilo minco tahay.”. Schweinsteiger oo ilin ka daadaneyso ayaa sidaa yiri.
“Markale ayaan is arki doonaa mustaqlka wixii intaa ka dambeeyna tan ugu fiican ayaan u rajeynayaa xiriirka kubbada cagta Jarmalka.”.
Xulka Germany ayaa iminka ciyaar saaxiibtinimo la yeelanaya xulka Finland taa oo lagu lamaaniyay macsalaameynta Schweinsteiger waxayna ciyaarta iminka mareysaa daqiiqadii 80-aad waana 2-0 Mesut Ozil ayaa dhaliyay mid ka mid ah goolasha.
RASMI: Alvaro Arbeloa oo ku biiray West Ham
SAWIRRO+MUUQAAL: Jack Wilshere oo si rasmi uga mid noqday Bournemouth…(Lambarkee loo xiray)+SAWIRRO